Tallaalkii Covid-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo laga dejiyay dalka Kenya. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Tallaalkii Covid-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo laga dejiyay dalka Kenya.
Tallaalkii Covid-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo laga dejiyay dalka Kenya.
Tallaalkii Covid-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo kamid aheyd dalalka ka faa’iideystay mashruuca COVAX oo ay hirgelisay Hay’adda caafimaadka Adduunka (WHO) oo kaashaneysa isbaaheysiyo dhowr ah ayaa waxa laga dejiyay dalka Kenya.
Previous article hey’adda WHO iyo Wasarada Cafimadka Somaliya oo Wasaaradda caafimaadka Galmudug ku Wreejiyay qalabka lagu baaro safmarka COVID-19.
Next articleDuqa magaaladda Boosaaso oo xilka iska casilay kadib markii madaxweynaha Puntland shaqada uu ka joojiyay.
War culus oo soo saareen midoowga Musharaxiinta
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden oo kulan la yeeshay labada...